Iko kweMireniyumu Kutenga Maitiro Echokwadi Akasiyana? | Martech Zone
Iko kweMireniyumu Kutenga Maitiro Ekuti Akasiyana Chaizvo?
Chipiri, June 20, 2017 Douglas Karr
Dzimwe nguva ndinogomera pandinonzwa izwi rekuti mireniyamu muhurukuro dzekutengesa. Pahofisi yedu, ini ndakakomberedzwa nemireniyamu saka fungidziro dzehunhu hwebasa nekodzero zvinondiita kuti ndinyanye. Wese munhu ini ndinoziva kuti zera riri kuvhiringidza matako uye tariro kune yavo ramangwana. Ini ndinoda zviuru zvemamirioni - asi ini handifunge kuti vakasaswa guruva remashiripiti rinovaita vakasiyana zvakanyanya kubva kune chero mumwe munhu.
Makore ane chiuru andinoshanda nawo haatyi ... zvakanyanya senge ndaive pazera iro. Musiyano chete wandinoona zvechokwadi hausi wezera, ndezve mamiriro ezvinhu. Mireniyamu ari kukura munguva iyo kufambira mberi kwetekinoroji kuri kukurumidza. Sanganisa tariro, ushingi, uye hunyanzvi hunowanikwa, uyezve, tichaona maitiro akasarudzika achibuda. Kune yangu poindi, 73% ye #millennials inogadzira kutenga zvakananga pamafoni avo
Nekuti ivo vadiki uye havana kuunganidza hupfumi, kutenga simba pamireniyumu hakusi kukuru sezvizvarwa zvekare asi huwandu hwemireniyamu huri kukura. Uye sezvo hupfumi hwavo uye huwandu hwavo zvichikura, chidimbu chevanhu chisingatombo kufuratirwa
Kwete kare kare, ungangodaro wakanzwa iyo avocado toast chiitiko, uko dutu rakataura kuti mireniyamu haakwanise kutenga zvinhu nekuti vaipambadza mari yavo pazvinhu zveumbozha zvavaisakwanisa kuwana. Zvinoenderana ne Bank of America Merrill Edge kudzidza, zviuru zvemamirioni zvakanyanya kukoshesa kukoshesa kufamba, kudya, uye nhengo yavo yekurovedza muviri pamusoro remangwana ravo remari. Ini pachangu, handina chokwadi kuti uyu muenzaniso wemireniyamu kusava nehanya, zvinogona kureva kuti chizvarwa chedu chidiki chinokoshesa zvimwe zviitiko zvakanyanya kupfuura vamwe.
Izvi zvinoenda mukukwikwidzana nezviuru zvemamirioni zvichishandisa mari nemakambani anosangana neavo zvakatipoteredza uye magariro zvitendero. Kana unazvo mari shoma kushandisa uye netariro yekuwedzera kukonzeresa nazvo, kupedza manheru neshamwari mune imwe cafe yemunharaunda ichipa kofi kubva kunzvimbo dzakagadzikana uye izvo zvinopa kudzokera kunharaunda yavo zvine musoro. Kutenda kuInternet uye pasocial media, idzi sarudzo dzekutenga dzinogona kuongororwa nyore - kwete zvakadaro pandaive mudiki!
Kana vachida zita rako, vanoimba rumbidzo dzako kune wese wavanoziva. Kana vakasadaro, ivo vanokurumidza kukushevedza kuti udane. Zvinorevei izvi zvemireniyumu zvekutenga maitiro zvinoreva kune vatengesi? Zvinoreva kumira shure kwezvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Iri kudzidza nzira yekubatana pamwe nekudiwa kwevateereri vakasiyana. Kuita proactive pane kuita zvine mutsindo kuchaenda nenzira refu yekuvandudza brand kuvimbika, kuwedzera kuchengetedzwa kwevatengi, uye kugadzira imwe mari IMI Chikwata Chemukati
Dzidza nezve mamireniyamu ari kuchinja nzvimbo yekutenga uye nzira dzakanakisa dzekubatana nechizvarwa.
Tags: zvikonzerodigitaalinenzvakatipoteredza zvikonzeroFacebookIni MIsimbakuvimbikamaitiro emireniyumukuvimbika kwezviuru zvemakoremireniyumu kunotengazvemireniyumu yekutenga maitirochiuru chemitambo yekutengesaZviuru zvemakoremafoni efonimobile shoppingomni-chiteshionline shoppingzvinogadzirwakutenga sarudzoratingszvitoro zvekuvimbika zvirongwamutengesizvemagariro zvikonzero
Zvese Zvidimbu Zvaunoda Kuisa neKo Local SEO Kushambadzira